सामग्री पुस्तकालय: यो के हो? र किन तपाइँको सामग्री मार्केटिंग रणनीति यसको बिना असफल भइरहेको छ Martech Zone
वर्षौं अघि हामी एउटा कम्पनीसँग काम गरिरहेका थियौं जुन उनीहरूको साइटमा लाखौं लेखहरू प्रकाशित भयो। समस्या यो थियो कि धेरै धेरै लेखहरू पढिएका थिए, खोज इन्जिनहरूमा पनि कम स्थानमा र उनीहरूमध्ये एक प्रतिशत भन्दा कममा राजस्व जिम्मेवार थियो।
म तपाईंलाई सामग्रीको तपाईंको आफ्नै पुस्तकालयको समीक्षा गर्न चुनौती दिन्छु। म विश्वास गर्दछु कि तपाईको कुन प्रतिशत पृष्ठहरू वास्तवमै लोकप्रिय छन् र तपाईका श्रोताहरूसँग स engaged्लग्न छन् भन्नेमा आश्चर्यचकित हुनुहुनेछ, कुन पृष्ठले खोजी ईन्जिनमा श्रेणीन गर्दैन। हामी प्रायः फेला पार्दछौं कि हाम्रो नयाँ ग्राहकहरू ब्रान्डेड सर्तहरूमा मात्र रँक गर्दछ, र सामग्रीमा हजारौं घण्टा खर्च गरेको छ जुन कसैले पढ्दैन।
यस विशेष ग्राहकसँग सम्पादकहरू र लेखकहरूको साथ पूर्ण सम्पादकीय स्टाफ थियो ... तर उनीहरूमा केन्द्रीय रणनीति थिएन के लेख्नु। तिनीहरूले केवल लेखहरू लेखे जुन उनीहरूले व्यक्तिगत रूपमा चाखलाग्दो पाए। हामीले उनीहरूको सामग्रीलाई अनुसन्धान गर्‍यौं र केहि समस्यापूर्ण समस्याहरू फेला पार्‍यौं ... हामीले एउटै विषयमा विभिन्न लेखहरूबाट बहुविध लेख फेला पार्‍यौं। त्यसोभए हामीले लेखहरूको एक टन भेट्टायौं जुन श्रेणीकृत गरिएको थिएन, कुनै स .्लग्नता थिएन, र राम्रोसँग लेखिएको थिएन। तिनीहरूसँग केहि जटिल थियो कसरी लेखहरूमा फोटो पनि समावेश छैन।
हामीले तुरुन्त समाधानको सुझाव गरेनौं। हामीले उनीहरूलाई सोध्यौं कि यदि हामी एक पाइलट प्रोग्राम गर्न सक्दछौं जहाँ हामी उनीहरूको न्यूजरूमका संसाधनहरूको २०% लागू गर्दछौं नयाँ सामग्री लेख्नुको सट्टा अवस्थित सामग्रीलाई सुधार गर्न र संयोजनमा।
लक्ष्य ए परिभाषित गर्नु थियो सामग्री पुस्तकालय - र त्यसपछि प्रत्येक शीर्षकमा एक पूर्ण र विस्तृत लेख छ। यो एक राष्ट्रिय कम्पनी हो, त्यसैले हामीले विषय उनीहरूको श्रोता, उनीहरूको खोज रैंकिंग, seasonतु, स्थान, र उनीहरूका प्रतिस्पर्धीहरूको आधारमा अनुसन्धान गरेका छौं। हामीले सामग्रीको निर्धारित सूची प्रदान गर्‍यौं, अनुसूचित मासिक, जुन हाम्रो अनुसन्धानमा प्राथमिकतामा थियो।
यो आकर्षण जस्तै काम गरे। हामीले विस्तृत सामग्री लाइब्रेरी निर्माण गर्न आवेदन दिएका २०% संसाधनहरूले अन्य सामग्रीको other०% प्रदर्शन गरे जुन अनावश्यक रूपमा उत्पादन गरिएको थियो।
सामग्री विभाग सारियो:
उत्पादकता लक्ष्यहरू पूरा गर्न हामी प्रत्येक हप्ता कति सामग्री उत्पादन गर्न जाँदैछौं?
र यसमा सारियो:
कुन लगानी हामीले अप्टिमाइज गर्नुपर्छ र अर्को मिल्नु पर्छ सामग्री लगानीमा फिर्ताको वृद्धि गर्न?
यो सजिलो थिएन। हामीले सामग्री संसाधनमा उत्तम आरओआई पाइरहेका छौं भनेर सुनिश्चित गर्न सामग्री उत्पादनको प्राथमिकता क्रमलाई पहिचान गर्न ठूलो डेटा विश्लेषण इञ्जिन पनि बनायौं। प्रत्येक पृष्ठ किवर्ड, वर्गीकृत कीवर्ड, भूगोल (यदि लक्षित), र वर्गीकरण द्वारा वर्गीकृत गरिएको थियो। त्यसपछि हामीले सामग्री प्रतिस्पर्धी सर्तमा क्रमबद्ध गरेका छौं - तर राम्रो श्रेणी छैन।
चाखलाग्दो कुरा, लेखक र सम्पादकहरूले पनि मन पराए। उनीहरूलाई एउटा शीर्षक, अवस्थित सामग्री प्रदान गरिएको थियो जुन नयाँ व्यापक लेखमा पुनः निर्देशित गरिनुपर्दछ, साथै वेब वरिपरि प्रतिस्पर्धी सामग्री। यसले उनीहरूलाई सबै अनुसन्धान प्रदान गर्‍यो जुन अझ राम्रो, गहिरो आकर्षक लेख लेख्न आवश्यक पर्दछ।
किन तपाईं सामग्री लाइब्रेरी बनाउनु पर्छ
यहाँ सामग्री लाइब्रेरी के हो र तपाईंको सामग्री मार्केटि strategy रणनीतिले यस प्रक्रियालाई समावेश गर्नुपर्दछ भनेर एक छोटो परिचय भिडियो छ।
धेरै कम्पनीहरूले समयसँगै यस्तै विषयहरूमा लेखहरू स collect्कलन गर्छन्, तर तपाइँको साइटमा आगन्तुक क्लिक गर्न र नेभिगेट गर्न गइरहेका छैनन् उनीहरूलाई आवश्यक जानकारी फेला पार्न। यो अत्यावश्यक छ कि तपाईंले यी विषयहरूलाई एकल, व्यापक, राम्रोसँग संगठित गर्नुभयो मास्टर प्रत्येक केन्द्रीय विषय मा लेख।
कसरी तपाइँको सामग्री पुस्तकालय परिभाषित गर्न
तपाइँको उत्पादन वा सेवा को लागी, तपाइँको सामग्री रणनीति को हरेक चरण मा संलग्न गर्नु पर्छ खरीददारको यात्रा:
समस्या पहिचान - उपभोक्ता वा व्यवसायको सम्पूर्ण समस्यामा राम्रोसँग बुझ्नको साथ साथै तपाईंलाई, तपाईंको परिवार, वा तपाईंको व्यवसायलाई हुने पीडाको कारण।
समाधान अन्वेषण - उपभोक्ता वा व्यापार समस्या समाधान कसरी हुन सक्छ भनेर बुझ्न। उत्पादनहरू वा सेवाहरू मार्फत भिडियो कसरी गर्ने भनेर।
आवश्यकता भवन - उपभोक्ता वा व्यवसायलाई बुझ्न उनीहरूको लागि के उत्तम हो बुझ्न प्रत्येक समाधानको पूर्ण मूल्यांकन गर्न कसरी मद्दत गर्दछ। यो एक उत्कृष्ट चरण हो जहाँ तपाइँ तपाइँको भिन्नता हाइलाइट गर्न सक्नुहुन्छ।
आपूर्तिकर्ता चयन - उपभोक्ता वा व्यापारलाई बुझ्न मद्दत गर्दछ किन उनीहरूले तपाइँ, तपाइँको व्यवसाय वा तपाइँको उत्पादन छान्नु पर्छ। यो जहाँ तपाईं आफ्नो विशेषज्ञता, प्रमाणपत्र, तेस्रो-पार्टी मान्यता, ग्राहक प्रशंसापत्र, आदि साझा गर्न चाहानुहुन्छ।
व्यवसायका लागि, तपाइँ अनुसन्धान गर्नेलाई पनि तपाइँको प्रत्येक प्रतिस्पर्धालाई कसरी प्रमाणीकरण गर्ने र सहमति निर्माण गर्नको लागि तपाइँको टोलीको अगाडि तपाइँको स्थिति प्रस्तुत गर्न मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ।
खण्डहरू जुन राम्रोसँग डिजाइन गरिएको थियो र उपशीर्षक देखि उपशीर्षकको माध्यमबाट स्किम गर्न सजिलो थियो।
अनुसन्धान प्राथमिक र माध्यमिक स्रोतहरुबाट तपाइँको सामग्री लाई विश्वसनीयता प्रदान गर्न।
बुलेटेड सूचीहरू लेखको मुख्य बुँदाहरू स्पष्टसँग वर्णन गरिएको छ।
इमेजरी। एक प्रतिनिधि थम्बनेल साझा गर्न को लागी, चित्र, र फोटो जहाँ संभव संभव लेख को लागी यसलाई राम्रो व्याख्या गर्न र समझ निर्माण गर्न को लागी। माइक्रोग्राफिक्स र इन्फोग्राफिक्स अझ राम्रो थियो।
भिडियो र अडियो सिंहावलोकन वा सामग्रीको छोटो वर्णन प्रदान गर्न।
हाम्रो ग्राहकसँग काम गर्दै,aशब्द गणना अन्तिम लक्ष्य थिएन, यी लेखहरू केही सय देखि केही हजार शब्दहरु मा गए। पुरानो, छोटो, अपठित लेखहरू ड्रप गरियो र नयाँ, रिच लेखहरूमा पुनः निर्देशित गरियो।
ब्याकलिंको १ मिलियन भन्दा बढी नतीजाहरुको विश्लेषण गरीएको छ र औसत # १ रैंकिंग पृष्ठमा १,1 1 ० शब्दहरू छन्
यो डेटा हाम्रो आधार र हाम्रो खोजहरु लाई जगेडा। यो पूर्ण रूपमा परिवर्तन भएको छ कि हामी कसरी हाम्रो ग्राहकहरूको लागि सामग्री रणनीतिहरू निर्माणमा हेर्छौं। अब हामी अनुसंधानको समूहको रूपमा गर्दैनौं र वस्तुहरू उत्पादन, इन्फोग्राफिक्स र ह्वाइटपेपर अब उप्रान्त गर्दैनौं। हामी जानाजानी एक डिजाइन पुस्तकालय हाम्रो ग्राहकहरूको लागि, तिनीहरूको हालको सामग्री अडिट गर्नुहोस्, र आवश्यक अन्तरहरू प्राथमिकता दिनुहोस्।
मा पनि Martech Zone, हामी यो गरिरहेका छौं। म 10,000००० भन्दा बढि पोष्टहरू भएकोमा गर्व गर्थें। तिमीलाई थाहा छ? हामीले ब्ल्गलाई लगभग posts,००० पोष्टमा छाँट्यौं र हरेक हप्ता पछाडि जान र पुरानो पोष्टहरूलाई संवर्धन गर्न जारी राख्यौं। किनभने तिनीहरू यति नाटकीय रूपान्तरण भएका छन्, हामी तिनीहरूलाई पुन: प्रकाशित गर्दछौं नयाँ। थप रूपमा, किनभने तिनीहरू प्राय: पहिले नै क्रमबद्ध हुन्छन् र तिनीहरूमा ब्याकलिks्कहरू छन्, ती खोज इन्जिन परिणामहरूमा स्काइर्केट गर्छन्।
तपाइँको सामग्री पुस्तकालय रणनीति को साथ सुरू गरीरहेको छ
सुरू गर्नका लागि, म यो तरिका अपनाउन सिफारिस गर्दछु:
संभावनाहरू र ग्राहकहरू के बारे मा अनलाइन अनुसन्धान प्रत्येक चरण क्रेताको यात्रामा त्यसले तपाइँ वा तपाइँका प्रतिस्पर्धीहरूलाई डो lead्याउँछ?
के माध्यमहरू के तपाईंले समावेश गर्नु पर्छ? लेख, ग्राफिक्स, कार्यपत्रक, सेतो कागजात, केस स्टडी, प्रशंसापत्र, भिडियो, पोडकास्ट, आदि।
के वर्तमान तपाइँको साइट मा सामग्री छ?
के अनुसन्धान के तपाइँ यसको सामग्री मजबूत र ब्यक्तिगत गर्न लेख मा घुसाउन सक्नुहुन्छ?
प्रत्येक चरण र प्रत्येक लेखमा, खोज ईन्जिन के गर्छन् प्रतियोगिहरु'लेख जस्तो देखिन्छ? तपाईं कसरी अझ राम्रो डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ?
बारेमा लेख्दै तपाईंहरेक हप्ता काम गर्ने कम्पनी छैन। तपाइँ तपाइँको संभावना र ग्राहकहरु को बारे मा लेख्न पर्छ। आगन्तुकहरू हुन चाहँदैनन् बेचे; तिनीहरू अनुसन्धान गर्न र मद्दत लिन चाहन्छन्। यदि म मार्केटिंग प्लेटफर्म बेच्दै छु भने, यो हामीले गर्ने कुराको बारेमा मात्र होइन वा हाम्रा ग्राहकहरूले सफ्टवेयर प्रयोग गरेर के पूरा गरिरहेका छन् भन्ने मात्र होईन। यो कसरी मैले मेरो ग्राहकको व्यवसायलाई परिवर्तन गरें र उनीहरूले काम गरेको व्यवसायलाई।
तपाइँका ग्राहक र सम्भाव्यहरूलाई मद्दत गर्नु भनेको श्रोतालाई उद्योगमा विशेषज्ञता र अधिकार पहिचान गर्न प्रेरित गर्दछ। र सामग्री सीमित हुन सक्दैन कसरी तपाईंको उत्पादन र सेवाहरूले तपाईंको ग्राहकहरूलाई मद्दत गर्दछ। तपाईको नियमावली, रोजगार, एकीकरण, र वास्तवमै अन्य सम्भावित विषयहरूमा लेखहरू समावेश गर्न तपाईको सम्भावनाहरू काममा संघर्ष गरिरहेका हुन सक्छन्।
कसरी तपाइँको सामग्री पुस्तकालय शीर्षक अनुसन्धान गर्ने
म जहिले पनि मैले विकसित गरेको सामग्रीको लागि तीन रिसर्च संसाधनहरूमार्फत सुरू गर्छु:
जैविक अनुसन्धान बाट Semrush सब भन्दा बढि खोजी गरिएका शीर्षकहरू र सम्भावित लेखलाई म आकर्षित गर्न चाहन्छु। उपयोगी रैंकिंग लेखहरूको सूची राख्नुहोस्! तपाईं आफ्नो लेख तुलना गर्न चाहनुहुन्छ तपाईं निश्चित हुनुहुन्छ कि तिनीहरू भन्दा राम्रो हो।
BuzzSumo बाट सामाजिक रूप बाट साझा अनुसंधान। BuzzSumo ट्र्याक गर्दछ कति पटक लेख साझा गरिन्छ। यदि तपाईं लोकप्रियता, साझेदारी योग्यता, र यस शीर्षकमा सबै भन्दा राम्रो लेख लेख्न सक्नुहुनेछ - यसका सगाई र राजस्व उत्पादन गर्ने तपाईंको सम्भावना बढी छ। यसको लागि कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारे बजसमोले हालसालै एक उत्तम लेख लेख्यो सामग्री विश्लेषण.
व्यापक वर्गीकरण विश्लेषण निश्चित गर्न तपाईको लेखले एक शीर्षकसँग सम्बन्धित सबै उप-विषयहरूलाई समेट्छ। चेक आउट गर्नुहोस् सार्वजनिक जवाफ दिनुहोस् शीर्षकहरूको वर्गीकरणमा केहि अद्भुत अनुसन्धानका लागि।
यी शीर्षकहरूको विशाल सूची बनाउनुहोस्, तिनीहरूलाई महत्त्व द्वारा प्राथमिकता दिनुहोस्, र तपाईंको साइट खोजी सुरू गर्नुहोस्। के तपाइँसँग त्यस्तो विषयवस्तुमा छुने सामग्री छ? के तपाईसँग त्यस्तो सामग्री छ जुन सम्बन्धित कुञ्जी शब्दहरूको लागि दर्ता हुन्छ? यदि यो सुधार गर्न सकिन्छ - एक समृद्ध, अधिक पूर्ण लेख लेख्नुहोस्। त्यसोभए सामग्री सम्हाल्नुहोस् जसले तपाईंको सम्भावना र ग्राहकहरूलाई अर्कोमा मद्दत गर्दछ।
प्राथमिकताहरूको साथ तपाईंको सामग्री क्यालेन्डर निर्माण गर्नुहोस्। म पुरानो अद्यावधिक र नयाँ लाईबेरिंग बीचमा विभाजन समय सिफारिस गर्दछु तपाईंको लाइब्रेरी पूर्ण नभएसम्म। र व्यापार परिवेश, टेक्नोलोजी प्रगति, र प्रतिस्पर्धा परिवर्तन गर्न को लागी धन्यवाद - तपाईको लाइब्रेरीमा थप्न सँधै नयाँ विषयहरु छन्।
जब तपाइँ पुरानो लेखहरूलाई नयाँ, अधिक विस्तृत लेखहरूमा मिलाउनुहुन्छ, पुरानो लेखहरूलाई पुनर्निर्देशनको साथ बदल्नुहोस्। म प्रायः अनुसन्धान गर्छु कि कसरी प्रत्येक लेख रैंकिंग छ र नयाँ लेखको लागि उत्तम श्रेणी निर्धारण परमललिंक प्रयोग गर्दछ। जब म यो गर्दछु, खोजी ईन्जिनहरू प्रायः फिर्ता आउँदछ र यसलाई अझ उच्च श्रेणी गर्दछ। त्यसो भए, जब यो लोकप्रिय हुन्छ, यो रैंकमा स्काईरोकेट गर्दछ।
तपाईंको सामग्री अनुभव
एक पायलट एक अवतरण को रूप मा आउँदै छ रूपमा आफ्नो लेख को बारे मा सोच्नुहोस्। पायलटले जग्गामा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छैन ... ऊ पहिले स्थलचिन्हहरू खोजीरहेको छ, ओर्लदै छ, र त्यसपछि विमान तल नपर्दासम्म बढीमा फोकस गर्दै छ।
मानिस शब्दको लागि लेख शब्द पढ्न सक्दैन, तिनीहरू स्क्यान यो। तपाईं हेडलाइन्स, बोल्डिंग, जोर, ब्लक उद्धरण, इमेजरी, र बुलेट पोइन्ट प्रभावी ढंगले प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ। यसले पाठकहरूलाई आँखा स्क्यान गर्न र त्यसपछि फोकस गर्न दिनेछ। यदि यो वास्तवमै लामो लेख हो भने, तपाईं यसलाई सामग्रीको तालिकाको साथ सुरू गर्न सक्नुहुनेछ जुन एन्कर ट्याग हुन् जहाँ प्रयोगकर्ताले क्लिक गर्न सक्दछ र उनीहरूको रूचिमा खण्डमा जान सक्छ।
यदि तपाईंसँग उत्तम पुस्तकालय हुन चाहनुहुन्छ भने, तपाईंको पृष्ठहरू आश्चर्यजनक हुनुपर्दछ। प्रत्येक र प्रत्येक लेखमा पूर्णतया आगन्तुकलाई प्रभाव पार्ने र उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने जानकारी प्रदान गर्न आवश्यक सबै माध्यमहरू हुनुपर्दछ। यो राम्रोसँग व्यवस्थित, पेशेवर हुनुपर्दछ, र तपाईंको प्रतिस्पर्धीहरूको तुलनामा एक असाधारण प्रयोगकर्ता अनुभव हुनुपर्दछ:
तपाईंको कल टु एक्सनलाई नबिर्सनुहोस्
सामग्री बेकार हो जबसम्म तपाईं यसमा कसैलाई कारबाही गर्न चाहानुहुन्न! निश्चित गर्नुहोस् तपाईंको पाठकहरूलाई अर्को के हो, के घटनाहरू तपाईं आउँदै हुनुहुन्छ, कसरी उनीहरूले अपोइन्टमेन्ट निर्धारण गर्न सक्छन् आदि।
टैग: backlinkoसामग्री पुस्तकालयसामग्री मार्केटिङसामग्री विपणन रणनीतिसामग्री उत्पादनगुगल रैंकब्लग पोष्ट कति शब्द हुनुपर्दछपुस्तकालयअनुसन्धानsemrushशब्द गणना